Izivakashi eziningi zaseRussia zivame ukukhetha ukuhlala ogwini lolwandle oluMnyama. I-Gelendzhik e-Krasnodar Territory iyindawo enhle kakhulu yokuzilibazisa nokucebile kwezigidi zabantu bakithi. Ukuxazulula inkinga yendlela yokuphumula eGelendzhik ngokunethezeka futhi hhayi ngezindleko zesabelomali sezinhlanzi, abaningi bahlala emkhakheni wangasese, bazikhethele ukuhlala kwelinye lezindwendwe ezinikezwe kabanzi. Inketho ethandwayo yokuhlala yindlu yezihambi "uLudmila" (Gelendzhik, Morskaya, 19).
Indlu yezindwendwe "Ludmila" (Gelendzhik) itholakala enkabeni ye-resort. Ikhemisi, imishayo namakholomu kutholakala ebangeni elihambahambayo. Kusuka endlini yezihambi ukuya ogwini lolwandle oluphakathi (isihlabathi kanye namatshe) kungatholakala ngezinyawo ngemizuzu engu-10. Kunezivakashi eziningi ezithakazelisayo lapha: ama-bhasikili, i-parachute, i-hydrocycles, ehamba ngebhanana elingenasiphelo futhi esikebheni. Ebhishi ukuze kube lula izivakashi eziningi nezindawo zokudlela ezinhle, kunezingqungquthela ezinomthunzi, izikhumba, ama-sun loungers.
Indlu yezindwendwe "I-Ludmila" (i-Gelendzhik) itholakala ebangeni elihamba phambili ezindaweni eziningi ezibaluleke kakhulu ezingqalasizinda zendawo yokuhlala.
Ibhishi elisolwandle linemizuzu engu-7.
Ebhebheni lelinhlamvu - imizuzu engu-7.
Kuboshwe - imizuzu engu-7.
Isikhungo sokuzijabulisa sinemizuzu engu-15.
Isikhungo seGelendzhik sinemizuzu eyishumi.
Endaweni yamanzi "i-Dolphin" - imizuzu engu-20.
Emakethe - imizuzu engu-10.
Esitolo (ukudla) - iminithi elingu-1.
Ngaphambi kokuma kwebhasi - engaphansi kweminithi elingu-1.
Ngaphambi kwe "Golden Bay" (ipaki yamanzi) - imizuzu eyishumi ngetekisi.
Indlu yezindwendwe "Ludmila" (Gelendzhik) inikeza ukupaka endaweni, kanye ne-Wi-Fi Internet. Ehhotela, izivakashi zithola ithuba lokuzipheka zona kanye nabathandekayo babo ekamelweni elenziwe ngokukhethekile elihlomele zonke izinto ezidingekayo. Kulabo abafuni ukukhathazeka ngokupheka, kukhona i-cafe endlini. Uma kunesidingo, kungenzeka ukuhlela ukudluliselwa (ngemali).
Inombolo yezakhiwo: 3.
Inani lezinqolobane: 2.
Inani lamakamelo: 7.
Imoto yokupaka izimoto (mahhala): izimoto ezingu-7.
Ikhishi elivamile (2): ukupheka ngokwakho.
Indlu yezindwendwe "uLudmila" (Gelendzhik) inikeza izinsiza ezilandelayo kubanikazi bamaholidi:
Inhlangano yokudlulisa (inkokhelo ekhokhelwayo);
Ukusetshenziswa komshini wokuhlanza (mahhala);
Qasha okuphephile (kusuka kubanikazi);
Ukusetshenziswa kwebhayisikili egcekeni;
Phumla egcekeni elihlaza;
Ukusetshenziswa kwensimbi kanye nebhodi le-ironing;
Sebenzisa i-microwave (ekhishini).
Imfuyo nezimo ezihlukahlukene zokuphila ezikhululekile zihlangana nabakhiqizi beGelendzhik. Indlu yokuvakasha "uLudmila" (iMorskaya, 19) inikeza izivakashi indawo yokuhlala ezigcwele konke okudingekayo. Izinhlobo zamakamelo:
"Standard" (18 metres square). Izindleko zokuphila: kusuka kuma-ruble angu-500-600.
Igumbi eli-2 (35 sq. M.). Izindleko zokuphila: kusuka ku-rubber 400-450.
Igumbi elilodwa nekhishi (45 sq. M.). Izindleko zokuphila: kusuka ku-rubber 400-450.
Inombolo yezihlalo: 2-4.
Impahla ifakwa: umbhede owodwa noma kabili, ikhabethe, izibhebhe zokulala, izihlalo, amatafula ombhede (umbhede), itafula lekhofi, itafula lokugqoka, i-hanger, isibuko.
Uhlu lwezinsiza ezijwayelekile luhlanganisa: ukutholakala kwesimo somoya noma uhlelo lokuhlukanisa, i-TV, isiqandisini, i-el. I-kettle, izitsha, i-balcony.
Ukushintsha kwelineni namathawula kwenziwa ngesonto.
Ukuhlanza kwenziwa ngesicelo.
Hlola ku: kusukela ngo-12 ebusuku.
Ukuhamba: kuze kube yishumi.
Ihhotela aliyona ukubhema.
Ngaphambi kokufika, izivakashi kufanele zikhokhele inkokhelo yangaphambi kwesikhathi (inani lilingana nezindleko zokuphila usuku olulodwa).
Inkokhelo ayikhokhiswa ngokukhansela okwenziwe okungenani amasonto amabili ngaphambi kosuku lokufika.
Ukuhlala nezilwane kungenzeka (ngokulungiswa kwangaphambili).
Ngemuva kwamahora angu-23, izivakashi kudingeka zigcine ukuthula.
Ukubhuka, ungaxhumana nehhotela ngocingo: 8 (918) 695-97-82.
Izivakashi zihlala ehhotela zijabula kakhulu. Ekubuyekezeni okuningi, abavakashi baqaphela iqiniso lezincazelo nezithombe, idatha esakhiweni.
Abavakashi bafana nendawo yehhotela eliseduze kolwandle, ezitolo, emakethe, ekudleni, esiteshini sebhasi, njll.
Lapho befika, izivakashi zinikezwa igumbi elinesimo sezulu, i-TV, isiqandisini, i-kettle kagesi kanye ne-balcony encane. Ungasebenzisa umshini wokuwasha mahhala, ungaba nokuphila. Kukhona igceke elihlaza oluhlaza, ikhishi lomphakathi.
UMninimzi uLyudmila uyamukelwa ngokufudumele.
Izivakashi ziyabonga kubanikazi behhotela ngezimo ezihlelekile zokuzijabulisa futhi batusa ukusungulwa komuntu wonke ukuba asebenzise amaholide abo eGelendzhik njengendlela yokuhlala yokuhlala ephumelele kakhulu.
Lolu ketshezi okugeza "Laurus". Flushing "Laurus": Izibuyekezo
Chokeberry: Pressure wahlulwa